Ikhampasi★eDowntown★WiFi★Kufuphi ne-Starbucks★Iindwendwe ezibalaseleyo
I-townhouse yonke sinombuki zindwendwe onguAshley
Ifakwe entliziyweni ye-Ames, e-Iowa!
• 2 ngomzuzu drive ukuya Iowa State Uni + edolophini Ames
• IiTV ezi-3 ezi-Smart ezineNetflix (i-smart TV e-1 kwigumbi lokulala ngalinye)
• Umgama wokuhamba ukuya edolophini yokuthenga kunye nokutya
• Ibhloko e-1 kwivenkile yokutya
• IiStarbucks ezi-2 kumgama wokuhamba
• Kanye ngaphaya kwesitalato ukusuka kwisikhululo sebhasi saseCy-Ride
• Indawo ezolileyo nekhuselekileyo
• Ukungena okungenazinjongo
•2 Br/Ibhafu eyi-1 (iibhedi ezi-2 zokumkanikazi kunye ne-1 queen ekhupha isofa)
• Iwasha/isomisi esikuloo ndawo
• Izixhobo ezigcweleyo + Ikhitshi egcweleyo
• I-Superhost--hlala ungenaxhala!
Le ndawo inamagumbi amabini okulala / i-1 yokuhlambela i-duplex kwaye inokulala ngokukhululekileyo ezintandathu.
Kukho ibhedi yokumkanikazi kwigumbi ngalinye lokulala kunye nendawo yokulala yesofa yendlovukazi kwigumbi lokuhlala. Iyunithi inekhitshi eligcweleyo elinefriji, isitovu, i-oveni, imicrowave, idishwasher kunye nekofu. Iimpahla zokupheka zibonelelwa ukuba uzisebenzise wena! Kukho iwasha yabucala kunye negumbi lokomisa elibekwe kwigumbi elingaphantsi ukuze uyisebenzise!
Igumbi lokuhlala linescreen esisicaba se-smart tv esinokufikelela kwiNetflix kunye neSlingTV (umabonakude wentambo yokusasaza). Kunye negumbi lokulala ngalinye elineTV ehlakaniphile eneNetflix ngokunjalo! Uya kuba nakho ukusebenzisa iTV ngexesha lokuhlala kwakho kunye nesantya esiphezulu se-intanethi.
Le propathi yi-duplex esecaleni. Ngeendawo zokungena ezahluke ngokupheleleyo kwaye akukho zindawo zokuhlala ekwabelwana ngazo. Uya kuba nemfihlo epheleleyo ngaphandle kweendawo eziqhelekileyo ekwabelwana ngazo. Ukungena kwipropati kulawulwa yi-wireless electronic smart lock eya kuvelisa ikhowudi yokungena ekhethekileyo esebenza kuphela ngexesha lokuhlala kwakho. Abafazi aba-3 abaziingcali bahlala ecaleni.
Le Airbnb likhubalo lendlu endala kakhulu, ukuba awuwafumani amakhaya amadala enomtsalane kwaye iyathandeka oku akunakukulingana. :-)
Sikwanayo ipakethe kunye nokudlala okukhoyo kubahambi bakho abancinci kwigumbi lokulala
4.98 · Izimvo eziyi-251
Ipropathi ikwindawo yokuhlala kwaye ikufutshane nokuthenga kufutshane! Yindawo ezolileyo ekhuselekileyo. Indlu ikumgama wemizuzu emi-2 ukuya kwibala lebhola ekhatywayo. Ikufuphi kakhulu neYunivesithi yase-Iowa State. Kukwakho imarike yamafama alapha evula yonke iMigqibelo ukusuka eNtwasahlobo ukuya ekwindla.
Asihlali e-Ames, kodwa sihlala kufutshane xa kukho unxunguphalo. Sifumaneka kwisaziso esiphambili. Nceda usithumelele umyalezo ukuba unayo nayiphi na imibuzo okanye ufuna uncedo. Siza kwenza konke okusemandleni ethu ukukunceda.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Ames